Isifo sikashukela nakho konke ngakho > Imithi
I-Kagocel yesifo sikashukela: imiyalo yomuthi ongasebenzi gciwane
Leli khasi lihloselwe ukufaka imininingwane eyengeziwe ngokusetshenziswa kweKagocel. Kunikezwa nezincomo nezeluleko ngezifo ngezifo - sicela uthintane nodokotela wakho.
Ungawuthatha kanjani umuthi uma umuthi wokuqala ubungekho ekuseni:
Isikimu sokuthatha umuthi ngomuthi owodwa kusihlwa:
- Ingane ineminyaka emine ubudala, baqala ukuthatha i-kagocel ngo-18.30 ithebhulethi eyodwa. Ungathatha kanjani ngokulandelayo?
Inkambo yokwelashwa ngamathebhulethi ayi-6. Uhlobo lolo luzoba ngale ndlela elandelayo: 1 usuku 1 ithebhulethi kusihlwa, izinsuku ezi-2 nezingu-3 zokwelashwa nge-kagocel - thatha i-1 ithebhulethi ekuseni nakusihlwa, ithebhulethi engu-4 ekuseni.
- Ingane ineminyaka engu-7 ubudala, baqala ukuthatha i-kagocel ngo-18.30 ithebhulethi eyodwa. Ungathatha kanjani ngokulandelayo?
Inkambo yokwelashwa ngamathebulethi ayi-10. I-Dosing schedule: usuku olu-1 - ithebhulethi engu-1 kusihlwa, izinsuku ezi-2 nezingu-3 zokuphuza ithebhulethi eyi-1 (ekuseni, ntambama nakusihlwa) izikhathi ezi-3 ngosuku, ngosuku lwe-4, ithebhulethi engu-1 ekuseni nethebhulethi eyi-1 kusihlwa, usuku olungu-5 lokuphatha
- Umuntu omdala waqala ukuthatha umuthi ngo-20 :00:
I-Dosing schedule: 1 usuku - amaphilisi ama-2 kusihlwa, izinsuku ezi-2 amaphilisi ama-3 izikhathi ngosuku, ngosuku lwesithathu lokuthatha amaphilisi weKagocel izikhathi ezi-2 (ekuseni nantambama) kanye nethebhulethi eyi-1 kusihlwa, izinsuku ezi-4, ithebhulethi eyi-3 kanye ngosuku, 5 - ngosuku - 1 ithebhulethi ekuseni nasemini. Esifundweni - amaphilisi angu-18.
Isikimu sokwamukelwa kwe-1 yokwamukelwa kwasemini:
- Ingane ineminyaka engu-7 ubudala, baqala ukuthatha i-kagocel ngo-15,00 ithebhulethi eyodwa. Ungathatha kanjani ngokulandelayo?
Inkambo yokwelashwa ngamathebulethi ayi-10. Uhlobo lolo luzoba kanjena: 1 usuku, 1 ithebhulethi ngo-15,00 futhi kusihlwa, izinsuku ezi-2 nezingu-3 zokwelashwa neKagocel - 1 ithebhulethi (ekuseni, ntambama nakusihlwa), okungukuthi, izikhathi ezi-3 ngosuku, izinsuku ezi-4 - ithebhulethi engu-1 ekuseni kusihlwa.
- Umuntu omdala waqala ukuthatha umuthi ngo-15 :00:
I-Dosing schedule: 1 usuku - amaphilisi ama-2 ngo-15,00 futhi kusihlwa, izinsuku ezi-2 amaphilisi ama-2 (ekuseni, ntambama nakusihlwa) amahlandla ama-3 ngosuku, ngosuku lwe-3 lokuthatha amaphilisi weKagocel 2 ekuseni nethebhulethi elilodwa lesidlo sasemini nakusihlwa, Usuku lwe-4 lokwemukelwa - i-1 ithebhulethi izikhathi ezi-3 ngosuku (ekuseni, ntambama nakusihlwa), izinsuku ezi-5 - 1 - ithebhulethi engu-1 ekuseni. Esifundweni - amaphilisi angu-18.
Ungawuthatha kanjani umuthi: chaza / ukuhlafuna noma uphuze ngamanzi? Ngaphambi noma ngemuva kokudla?
Ukusebenza kwesidakamizwa akuhlobene nokudla kokudla.
Kungenzeka yini ukuthi usebenzise i-Kagocel ngasikhathi sinye nezinye izidakamizwa?
Ngokusho kwemiyalo, i-kagocel ihlanganiswe kahle neminye izidakamizwa ezingama-antiviral, ama-immunomodulators kanye nama-antibhayoriki. Thintana nodokotela wakho ngesidingo sokuqokwa okuhlangene okunje. Qiniseka ukuthi ukhumbula ukuphambana kwesidakamizwa ngasinye. Ukuthintana nokuqokwa kweKagocel: ukukhulelwa nokukhishwa, izingane ezingaphansi kweminyaka engu-3 ubudala, ukuhoxa kwezakhi zomuthi, ukushoda kwe-lactase, ukungabekezeleli kwe-lactose, i-glucose-galactose malabsorption.
Ngingayithatha kangaki i-kagocel? Kugcine kuthathwe ngenyanga edlule.
I-Kagocel yisidakamizwa esinqunywe ngokwezinkomba. Ngaphambi kokusebenzisa uKagocel, bonisana nodokotela wakho bese ulandela imiyalo yakhe.
Ngingakwazi ukuthatha i-kagocel kanye nama-antibhilayithikhi ngasikhathi sinye?
Ngokusho kwemiyalo, i-kagocel ihlanganiswe kahle neminye izidakamizwa ezingama-antiviral, ama-immunomodulators kanye nama-antibhayoriki. Thintana nodokotela wakho ngesidingo sokuqokwa okuhlangene okunje.
Ngingawuthatha yini umuthi wehypertension / ushukela, njll?
Ukuthintana nokuqokwa kwesidakamizwa uKagocel: ukukhulelwa nokukhulelwa, izingane ezingaphansi kweminyaka engu-3 ubudala, ukuhoxa kwezakhi zomuthi, ukushoda kwe-lactase, ukungabekezeleli kwe-lactose, i-glucose-galactose malabsorption. Sincoma ukuthi uthintane nodokotela wakho futhi ulandele imiyalo yakhe.
Ngingamthatha yini uKagocel uma ingane yami ineminyaka emithathu?
Akunakwenzeka. Imithi ithathwa ngokuya ngemiyalo. UKagocel uvunyelwe ezinganeni kusuka eminyakeni emi-3.
Ngingayithatha yini iKagocel ngesikhathi sokukhulelwa?
Cha. Ngokusho kwemiyalo, ukukhulelwa nokukhishwa komzimba (lactation) kungukuphambana ngezinhloso zomuthi.
Ngingamthatha uKagocel ngotshwala?
Imiyalo yokusetshenziswa kukaKagocel ayinazinkomba zokuhlanganiswa kwesidakamizwa notshwala. Kodwa-ke, kufanele kukhunjulwe ukuthi akunqweneleki ukuphuza utshwala ngenkathi ulashwa nanoma yiziphi izidakamizwa, noma ngabe kungekho imiyalo efanelekile emiiyalweni yomuthi.
I-kagocel ithathwa ngeminyaka emingaki ngokohlelo lwabadala?
Kusuka eminyakeni eyi-18 nangaphezulu, uKagocel ubekwa ngokwesikimu kubantu abadala.
Ingabe i-kagocel isetshenziselwa ukuphatha i-herpes ezinganeni?
Cha. Ngokusho kwemiyalo, iKagocel ikhonjiswa ezinganeni ukwelashwa nokuvimbela umkhuhlane kanye nezinye izifo eziyingozi zokuphefumula ezifweni ezibangelwa yigciwane.
Ochwepheshe bomkhiqizi wezidakamizwa uKagocel onemfundo ephakeme yezokwelapha kanye neziqu ezihlukene zemfundo uphendula imibuzo yakho.
Sawubona. Ngingakwazi yini ukuthatha amaphilisi weKagocel ngaphandle kwemvume kadokotela?
Umuthi uKagocel ubhekisele ezidakamizweni ezisetshenziswayo ezingekho emthethweni.
Sawubona ingane yami, eneminyaka eyi-11, kunomkhuhlane omkhulu. Ngabe kukhona ongasisiza? Futhi ingabe kufanelekile ukuyithenga? Ngiyabonga!
UKagocel uboniswa ekwelapheni nasekuvimbeleni umkhuhlane.
Ungayinikeza kanjani iKagocel, i-snot kuphela yomntwana isiqalile, inikeze njengephraphiksi noma nge-ARVI!? Ingane eneminyaka engu-4
Shayela udokotela bese ulandela ama-aphoyintimenti akhe
Baphuze i-kagocel ngoDisemba ngasekupheleni kukaJanuwari wagula futhi, ngingaphinde ngiphinde isifundo? Kukangaki ngonyaka ungaphuza inkambo ephelele uma ugula kaningi?
Xhumana nodokotela wakho ukuze uthole izeluleko.
Sawubona, kungenzeka yini ukuthi uthathe amaphilisi weKagocel ngaphandle kokuqokwa kodokotela
Ngosuku lokuqala ikhanda lalimala kabi .. Ngosuku lwesibili kwaba nezinga lokushisa lama-37.8. Ngingaqala manje ukuthatha i-kagocel manje?
ngisize ngo-kagocel ubuthi iminyaka emi-4
Ungakwazi ukuhlanganisa ukuthatha i-kagocel ne-inhalation ye-interferon yokuvimbela umkhuhlane?
Sawubona, ngitshele uma ngisebenzisa umuthi ekwelapheni nasekuvimbeleni igciwane lomkhuhlane we-H1N1.
sawubona, ingane 12.uyaphuza i-bronchovax, iphuze isifundo esisodwa kuze kube manje. Futhi, ngenkathi nginika ikhefu ngezinjongo zokuvimbela, uKagocel. Kungenzeka yini? Noma zisetshenziswe ndawonye?
Sawubona Bengifuna ukuthenga lo muthi ekhemisi enganeni, kodwa ngathola ukuthi imiyalo yabo ithi ihlanjululwe ezinganeni ezingaphansi kweminyaka engu-6! Ingane ithatha umuthi kusuka eminyakeni engu-3 yobudala. Ngisize ngithole! Ngiyabonga
Umuthi uvunyelwe ezinganeni kusuka eminyakeni emi-3
Indodana yami ineminyaka engama-21 ubudala, yagula ngenxa yokugula okuphefumula kakhulu, yabe isiyalela i-kagocel. Sithatha usuku lwesibili lokuthuthuka, cha, ithi kuyangijabulisa, ngingaqala ngokunikeza i-antibiotic futhi ukuthi iyiphi engcono. Ngaphezu kwalokho, umphimbo wami nomkhuhlane omubi
Sawubona ntambama Ake ungitshele, udokotela ungitshele ukuthi anginawo umkhuhlane, kepha isifo se-rotovirus, kungenzeka ukuthatha ama-kakgoets nge-rotovirus, futhi ngasiphi uhlelo
Ukutheleleka ngeRotavirus akuyona inkomba yokuqokwa kwe-kagocel ngokuya ngemiyalo yomuthi
Ngingathatha uKagocel ngokushesha ngemuva kwe-Amiksin?
Izinsuku ezintathu wanika ingane engu-10 ubudala u-ingaverine, ungashintshela ku-kagocel. Kusukela ku-ingaverine ebuntwaneni ukuvikela umkhuhlane kuyingozi ukunika
Sawubona Ngabe uKagocel uzosiza nganoma yiluphi uhlobo lomkhuhlane? Ingabe umkhuhlane wezingulube ukhona futhi ohlwini lwezifo olwa nalo muthi?
kungani ukuvimbela, izingane zinqunyelwa i-1 i-tablet izinsuku ezi-2, bese kuthi ikhefu elifinyelela ezinsukwini ezi-5? ngenxa yokuxinana okuphezulu komuthi enganeni noma ebuthakazini bomuthi?
Impendulo ye-interferon yomzimba ekuphathweni kweKagocel ibonakaliswa ukusakazeka isikhathi eside (kuze kube yizinsuku ezingama-4-5) ukusakazwa kwe-interferon emgodini wegazi. Ngakho-ke, umuthi wokuvimbela unesheduli yezinsuku ezi-2, ikhefu lezinsuku ezi-5.
Ingabe i-kagocel isetshenziswa ekwelapheni umkhuhlane?
Kungenzeka yini ukuthi ngesikhathi esisodwa uthathe i-kagocel ne-ingavirin 60 kumfana, iminyaka eyi-11 ubudala, isisindo esingu-78 kg, uma kunjalo, kusiphi isilinganiso?
Ngesikhathi sokuqubuka kobhubhane lomkhuhlane, kungenzeka ukuthi uthathe i-Kagocel ye-prophylaxis enesifo se-autoimmune
Izici ze-Pharmacological zeKagocel
I-Kagocel yisidakamizwa esidonsa i-endfer genetic interferon. Ngaphezu kwalokho, ukusetshenziswa kwesidakamizwa kungavuselela ukukhiqizwa emzimbeni we-interferon yayo uqobo. Umuthi unomphumela we-immunomodulatory emzimbeni.
Ukusetshenziswa kweKagocel ku-mellitus yesifo sikashukela kubonakaliswa ngezinga eliphakeme lokuphepha komzimba.
Indlela eyinhloko yokusebenza kwesidakamizwa ihlose ukukhuthaza ukwenziwa komzimba kwe-interferon yayo uqobo. Ukusetshenziswa kweKagocel kwenza sikwazi ukwenza ngcono ukukhiqizwa kwe-interferon sekwephuzile esigulini emzimbeni.
I-Late interferon ingxube ye-alpha ne-beta interferon, ebonakala ngokuba khona komsebenzi ophezulu we-antiviral.
Ukusetshenziswa kwesidakamizwa kwenza ukuthi sikwazi ukuthuthukisa ukwakheka kwe-interferon cishe kuwo wonke amaqembu amaseli abamba iqhaza elibonakalayo ekwakhekeni kwempendulo ye-antiviral emzimbeni wesiguli.
Lapho uthatha umuthi ngemithamo enconyiwe, awunobuthi, umuthi awunqwabelana ezicutshini.
Umuthi awunazo izakhiwo ze-mutagenic ne-teratogenic. Umuthi awunazo izakhiwo ze-carcinogenic ne-embryotoxic.
Umphumela omkhulu kakhulu ungatholakala ekwelapheni ukutheleleka ngegciwane nokusebenzisa umuthi lapho umuthi uqalile ukungathathwa kungakapheli izinsuku ezingama-4 emva kokuqala kokutheleleka.
Uma usebenzisa i-Kagocel njenge-prophylactic, ingasetshenziswa nganoma yisiphi isikhathi.
Ukwakheka, izinkomba nemiphumela emibi
Umuthi ngomkhakha wezemithi wenziwa ngesimo samathebulethi abenombala omhlophe onsundu.
Isakhi esikhulu esisebenzayo yi-kagocel.
Ngaphezu kwekhompiyutha enkulu, ukwakheka kwalesi sidakamizwa kufaka phakathi amanye ongezayo adlala indima yokusiza.
Izingxenye ezingeziwe zesikhungo yilezi:
I-Ludipress, efaka i-lactose monohydrate ne-povidone.
Umuthi ufakwa emaphaketheni weseli, afakwe emabhokisini amakhadibhodi.
Isibonakaliso esiyinhloko sokusetshenziswa kweKagocel ukuvikela kanye nokwelashwa komkhuhlane kanye nezinye izifo zokuphefumula ezihlasela igciwane. Ngaphezu kwalokho, umuthi usetshenziselwa ukwelapha i-herpes.
I-Kagocel ingahle isetshenziselwe ukwelapha ukutheleleka ngegciwane ezinganeni kusuka eminyakeni eyisithupha.
Njenganoma imuphi omunye umuthi okhona, iKagocel inezinombolo eziningi zokwephulwa ukuze isetshenziswe.
I-contraindication esemqoka yilena elandelayo:
ukuba khona kwe-hypersensitivity kuzakhi zomuthi,
izingane ezingaphansi kweminyaka engu-6.
Imiphumela emibi ejwayelekile yesidakamizwa ukusabela komzimba.
Ukusetshenziswa kwesidakamizwa kuhlanganiswe kahle neminye imishanguzo ye-antiviral, izidakamizwa ezinezakhiwo ze-immunomodulating. Ngaphezu kwalokho, lo muthi ungasetshenziswa ngasikhathi sinye nama-antibhayithiki esifo sikashukela, asetshenziswa ekwelashweni okuyinkimbinkimbi kwezifo ezinomsuka wegciwane negciwane-igciwane.
Imiyalo yokusebenzisa amaphilisi
Umuthi uphuzwa ngomlomo, kungakhathalekile isikhathi sokudla.
Kwabadala, umthamo onconywayo ekwelapheni izifo ezithinta izifo zokuphefumula obukhulu ngamathebhulethi amabili kathathu ngosuku ezinsukwini ezimbili zokuqala, futhi umuthi unconyelwe ukusetshenziselwa umthamo wethebhulethi elilodwa kathathu ngosuku ezinsukwini ezimbili ezizayo.
Isikhathi senkambo yokwelashwa siyizinsuku ezi-4. Yonke inkambo yokwelashwa izodinga amaphilisi ayi-12.
Lapho wenza i-prophylaxis, kufanele yenziwe ngemijikelezo yezinsuku eziyi-7 lilinye.
Umthamo wokuvimbela ukutheleleka komkhuhlane ungezansi: ngezinsuku ezimbili, umuthi uthathwa amaphilisi ama-2 kanye ngosuku, ngemuva kwezinsuku ezimbili zokusebenzisa umuthi, ikhefu lezinsuku ezi-5 kufanele lithathwe.
Ekupheleni kwekhefu, inkambo iyaphindwa. Isikhathi sesifundo sisuka ezinsukwini eziyi-7 kuya ezinyangeni ezimbalwa.
Ukwelashwa kwe-herpes, umuthi ubekwa kumthamo wamaphilisi amabili kathathu ngosuku izinsuku ezinhlanu. Kuyo yonke inkambo yokwelashwa ehlala ezinsukwini ezi-5, kuzodingeka amaphilisi angama-30 omuthi.
Ukwelapha izingane ezineminyaka engu-6 ubudala, kunqunywa umuthi kulelithamo elilandelayo:
Izinsuku ezimbili zokuqala, ithebhulethi elilodwa kathathu ngosuku.
Izinsuku ezimbili ezilandelayo, ithebhulethi elilodwa kabili ngosuku.
Kuyo yonke le nkambo yokwelashwa, kuzodingeka amaphilisi ayi-10 omuthi.
Uma kwenzeka kweqa ngokweqile umuthi, kunconywa ukunquma isiphuzo esiningi, ngemuva kwalokho ukuhlanza kufanele kucasulwe.
Ukuthatha lo muthi akuliphazamisi izinga lokuphendula komuntu kwengqondo, ikakhulukazi lapho kukhona isifo sikashukela kanye nokuwohloka komqondo.
Ngakho-ke, ukuphathwa kwalesi sidakamizwa kubantu abashayela izimoto nezindlela eziyinkimbinkimbi kuvunyelwe.
Imibandela yeholide nokugcinwa, ama-analogues, izindleko nokubuyekezwa komuthi
Umuthi ungathengwa kunoma iyiphi ikhemisi ngaphandle kwemithi.
Gcina umuthi ungafinyeleleki ezinganeni. Indawo yokubeka umuthi kufanele ivikeleke elangeni. Izinga lokushisa endaweni yokugcina umkhiqizo womuthi akufanele lidlule ama-25 degrees Celsius. Impilo yeshelufu yensiza yezokwelapha yiminyaka emi-4. Ngemuva kwalesi sikhathi, ukusetshenziswa komuthi kwenqatshelwe.
Uma sibheka izibuyekezo ezitholakalayo, umuthi uyindlela ephumelelayo yokulwa nokutheleleka ngegciwane okuthinta ipheshana lokuphefumula lomuntu eliphezulu. Ukubuyekezwa mayelana nomuthi kuqinisekisa ukusebenza kwawo okuphezulu ekulweni nasekuvimbeleni ukutheleleka ngegciwane lomkhuhlane ne-herpes virus.
Uma kudingekile ukufaka esikhundleni seKagocel nezinye izidakamizwa ezingaphili, udokotela ohambelayo angaphakamisa ukusetshenziswa kwezimpawu zawo.
Izifanekiselo ezivame kakhulu zeKagocel yilezi zidakamizwa ezilandelayo:
Le mishanguzo inezinkomba ezifanayo zokusebenzisa kanye ne-contraindication, futhi ihluka kuphela kusithako esiyinhloko esisebenzayo. Yonke le mishanguzo inezindleko eziphansi kancane uma uyiqhathanisa neKagocel.
Izindleko zeKagocel eRussia ngokwesilinganiso zingama-ruble angama-260 ngepakethe ngalinye. Mayelana nezimpawu ze-ARVI zesifo sikashukela sizotshela ividiyo ekulesi sihloko.
Empini yokulwa nokutheleleka ngegciwane abantu abahlangabezana nayo minyaka yonke, futhi abanye kaningana ngonyaka, umuthi ongagculisi uKagocel usebenza. Yena, ngokungafani nezidakamizwa eziningi ezifanayo, uyasebenza kunoma yisiphi isigaba salesi sifo. Ngosizo lweKagocel, inkambo yalesi sifo iyavuselelwa futhi incishiswe, futhi ubungozi bezinkinga buyehliswa.
Umuthi uthole ukuthandwa ngenxa yokuphepha kwawo kanye nenani elincane lemiphumela emibi. Ngaphezu kwalokho, umuthi okukhulunywa ngawo uvunyelwe ukuthi usetshenziswe ebuntwaneni, umdala kuneminyaka emithathu. Ngokuvamile kusetshenziselwa ukwelashwa komkhuhlane, ukutheleleka komoya okuphathelene nokuphefumula kanye nokuqeda ama-pathologies ahambisana nokutheleleka nge-herpes. Zonke iziguli ezithatha i- "Kagocel" kufanele zilandele ngokuqinile imiyalo kadokotela nemiyalo efakwe kwiphakeji ngayinye. Ngaphandle kwalokho, ukwelashwa nge-ejenti ye-antiviral kuzovusa ukungezwani komzimba.
Isikhathi somthelela wokwelapha sithatha izinsuku ezingama-5-7, futhi lokhu, kwenza ukuthi sikwazi ukuthatha "iKagocel" njenge-prophylaxis yomkhuhlane kanye ne-SARS.
Into esemqoka yesidakamizwa ithuthukisa umsebenzi nokukhiqizwa kwama-interferon, anomphumela wokukhombisa ukungasebenzi. Kodwa-ke, umkhiqizo wezemithi ukhiqiza i-interferon, isebenza ku-immune immune, ivuselela ukusebenza kwama-cytokines (amaprotheni amaseli asebenze amasosha omzimba). Inani eliphakeme kakhulu le "Kagocel" esegazini liyaphawulwa, ezinsukwini ezi-2 ngemuva kokuthathwa komthamo wokuqala womuthi futhi uhlala amahora angama-72. Izakhi zomuthi "i-Kagocel", zingena emzimbeni womuntu, cishe azingenwa egazini lokugaya ukudla. Ukubona imithamo enconyiwe, umuthi awunawo umthelela onobuthi emzimbeni womuntu, futhi ususwa ngokuphelele kuwo ngezinga elikhulu kakhulu ngohlelo lokugaya ukudla.
Kungenzeka yini ngesifo sikashukela?
Ngo diabetesics, kwehla buthakathaka okukhulu kwamasosha omzimba, Ngakho-ke, nganoma iyiphi i-complication yomkhuhlane, ingozi yokuthola ama-pathologies angathi sína ikhula, ikhula kakhulu futhi yonke le nkinga yokugula okuyisisekelo kanye nesimo jikelele sesiguli. Kungakho ngesifo sikashukela kubalulekile ukugcina amasosha omzimba elisezingeni eliphezulu kakhulu, ngoba ngale ndlela kuphela ungazivikela ekuthelelekeni ngegciwane lomkhuhlane. Umuthi "uKagocel" uzosiza kulokhu, ongathathwa kuphela ngemuva kokubonisana nodokotela.
Umkhuhlane ojwayelekile uyisici sokuxinzelela umzimba, ngenxa yalokho ukwenziwa kwe-insulin kuncishisiwe.
Kuyafaneleka ukunaka iqiniso lokuthi amakhaza, umkhuhlane, uvame ukuba yinto edabukisayo yokwakha izimo ezicindezelayo ezithinta kabi ukukhiqizwa kwamaseli we-pancreatic insulin. Ngenxa yalokhu, i-hormone ebhekele ukwenziwa kwe-glucose egazini ayibhekane nomsebenzi wayo - ukunciphisa ushukela.
Ezigulini ezinesifo sikashukela kuyingozi ukuthuthukisa izinkinga, isibonelo, inkinga ye-hyperglycemic. Ngakho-ke, ukuze uvimbele ukuwohloka kwenkambo yesifo sikashukela, isiguli sinconywa lapho kuqala uphawu lomkhuhlane noma umkhuhlane wokuya esikhungweni sezokwelapha. Uchwepheshe uzonikeza umuthi ophephile ongafanele uvunyelwe ukuthi usetshenziswe kushukela. Okunye kwalokhu kungaba yi- "Kagocel", okunconyelwe ukuthi kusetshenziswe hhayi nje njengomkhiqizo wemithi yokwelapha, kodwa futhi njengento evimbayo, ukuvikela isifo esithathelwanayo sepheshana lokuphefumula elihambisana nomkhuhlane.
Contraindication "Kagocela" yesifo sikashukela
"I-Kagocel" ayinqunyelwe i-hypersensitivity ezingxenyeni zomuthi. Kuyingozi ukuyiphuza ngesikhathi sokuncelisa, ukuzala ingane, izingane ezingaphansi kweminyaka emithathu. Ukushoda kwe-lactase, i-pathology ebonakala ngokungakwazi ukugaya nokuthambisa i-lactose, kanye ne-glucose-galactose malabsorption, kungumkhawulo ekuphathweni kweKagocel.
2 Ukukhipha ifomu nokwakheka
3 indlela yokusebenza
4 Kungenzeka yini ngesifo sikashukela?
I-5 Contraindication "Kagocela" yesifo sikashukela
Abantu abanesifo sikashukela ngenxa yokungatheleleki kokumelana komzimba kungenzeka batheleleke ngamagciwane. Umuthi "i-Kagocel", onempahla yokuthambisa, uzosiza isiguli ukuthi sikhulise amasosha omzimba futhi ngaleyo ndlela sivimbele ukwakhiwa kwama-pathologies ahlukahlukene. Kodwa-ke, ngesifo sikashukela i-mellitus "Kagocel" singasetshenziswa kuphela ngemuva kokubonisana nodokotela ofanele kakhulu.
Umuthi lo usebenza ngendlela yamathebulethi, okukhona kuwo into esebenzayo - i-kagocel nezinto ezinjalo ezisizayo:
Isitashi samazambane siyingxenye yezidakamizwa.